Famoahana sarimihetsika fonosana vita amin'ny plastika China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Plastika fandefasana plastika,Fanaterana fonosana plastika,Fandefasana fandefasana fandefasana
Home > Products > Sarimihetsika mihetsika > Sarimihetsika mihetsika amin&#39;ny milina > Famoahana sarimihetsika fonosana vita amin&#39;ny plastika
Plastika fandefasana plastika dia tsy miraikitra, mifikitra amin'ny tenany fa tsy ilay zavatra. Azo antoka tsara ny hifikitra amin'ny tavan'ireo boaty mandritra ny fitahirizana sy fitaterana azy. Plastic Wrap Shipping dia tonga lafatra koa hitazona ny birao, fanaka na ireo rakitra rakitra fampirimana mihidy ao anaty fitaterana nefa tsy misy fitetezana. Ny fandefasana ny Stretch Wrap dia mora sy mora ampiasaina, izany dia fomba ara-toekarena vahaolana fonosana.
Ny fitaovana fototra ho an'ny famokarana horonan-tsary dia ambany polyethylene ambany (LLDPE), ny endrika pruchased Exxon Mobil sy ny orinasa petrokimia hafa, nahazo antoka tsara ny fanoherana fahirano, fiantraikan'ny fihenan-tsakafo ary fiatoana.
Ny sarimihetsika fanatanjahantena avo lenta Yalan dia ankatoavin'ny SGS, mifanaraka amin'ny fenitra ISO9001: 2015.
Plastika fandefasana plastika Fanaterana fonosana plastika Fandefasana fandefasana fandefasana Plastika fonosana plastika Tape fandefasana plastika Famolahana fandefasana plastika Satroka fandefasana plastika maharitra Sétotra fandefasana plastika ambany